कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक : पदाधिकारी नियुक्ती कहिले ? » खबरहरुको एउटै केन्द्र
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक : पदाधिकारी नियुक्ती कहिले ?
आईतवार, बैशाख ९, २०७५ ११:४७ मा प्रकाशित !
चैत ९ गतेबाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक केन्द्रीय सदस्य खुमबहादुर खड्काको निधनपछि चैत १६ मा स्थगित भएपछि अाइतबारदेखि पुन बस्दैछ। पार्टी मुख्यालय सानेपामा बस्ने बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम नसकिएकाले पहिलो दिनको बैठकमा धारणा राख्न बाँकी नेताहरुले आफ्नो धारणा राख्नेछन्।
यसअघि ७ बैशाखदेखि सुरु गर्ने भनिएपनि मालिन्दो एयर दुर्घटनाका कारण त्रिभुवन विमानस्थलमा आन्तरिक उडान प्रभावित भएपछि बैठक आजका लागि सारिएको थियो।
अझै करिव २५ जना केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो धारणा राख्न बाँकी रहेको छ। यसअघिको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यले निर्वाचनमा पार्टीको पराजयको जिम्मा नेतृत्वले लिनुपर्ने बताएका थिए। बैठकमा उनीहरुले सभापति शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना गर्दै नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने समेत बताएका थिए।
केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी पदाधिकारी नियुक्ती गर्ने संभावना रहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा रिक्त रहेका तीन जना पदाधिकारी मयोनयन गर्ने तयारी सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन्। बैठकमा सभापति देउवाले उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्ने बताइएकाे छ।
विधानमा महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमात्रै उपभापतिमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था भएका कारण निधिको संभावना प्रवल
कांग्रेसको विधानमा उपसभापति, महामन्त्री र र सहमहामन्त्री सभापतिले नियुक्ती गर्ने व्यवस्था छ। त्यसकालागि सभापतिले पार्टीभित्र सन्तुलन मिलाएर आफू अनुकुल व्यक्तिलाई पदाधिकारी नियुक्ती गर्न सक्छन्।
कांग्रेसभित्र उपसभापतिका दाबेदारका रुपमा नेताहरु विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार रहेका छन्। तर विधानमा महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमात्रै उपभापतिमा नियुक्त हुन सक्ने व्यवस्था भएका कारण निधिको संभावना प्रवल रहेको स्रोतले जनायो।
‘उपसभापतिको दाबेदारका रुपमा निधि र गच्छदारले दाबी गरेपनि गच्छदार महाधिवेशनबाट निर्वाचन केन्द्रीय सदस्य नभएका कारण उहाँको संभावना कम छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यदि सभापतिले बाधा अड्काउ फुकाएर मनोनित सदस्य पनि उपसभापतिमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु भयो भने गच्छदारजीको संभावना रहन्छ, नत्र उपसभापतिमा निधिजीकै संभावना बलियो छ।’
गच्छदारलाई सभापति देउवाले संसदीय दलको उपनेतामा मनोनय गरिसकेका छन्। निधि भने निर्वाचनमा पराजय भएपछि उपसभापतिकालागि लविङमा छन्। निधिले लामो समयदेखि देउवालाई साथ दिँदै आएका छन्। सोही आधारमा पनि उपसभापतिमा निधिको संभावना बलियो रहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन्।
यसैगरी महामन्त्रीमा देउवा पक्षकै पूर्णबहादुर खड्का, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र डा. प्रकाशशरण महतले दाबी गरेका छन्। तीनजनामध्येबाट एकजनालाई छान्न देउवालाई सकस परेको छ। खड्का कांग्रेसभित्र इमान्दार र स्वच्छ छवि भएका नेताका रुपमा परिचित छन्। तर, पछिल्लो समय उनको सभापति देउवासँगको सम्बन्ध सुमधुर नरहेको बताइएको छ।
सहमहामन्त्रीमा भने रामचन्द्र पौडेल पक्षधरले दाबी गरेको छ। सभापति देउवाले पनि पार्टीभित्रका आन्तरिक सन्तुलन मिलाउन सहमहामन्त्री पौडेल पक्षलाई दिने मनस्थिति बनाएका छन्। यदि पौडेल पक्षले सहमहामन्त्री पाउने अवस्था आयो भने त्यसकालागि दुई नेताको नाम चर्चामा छ। नेताहरु आनन्दप्रसाद ढुंगाना र दिलेन्द्रप्रसाद बडूको नाम सहमहामन्त्रीलागि चर्चामा छ।
स्रोतका अनुसार ढुंगाना पुराना नेता भएकाले सहमहामन्त्री आफ्नो भागमा परेको खण्डमा उनलाई नै बताउने तयारी भएको छ। यद्यपी अहिलेसम्म सभापतिले पदाधिकारी कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा मुख खोलेका छैनन्। महधिवेशन भएको दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत पदाधिकारी नियुक्ती नगरेको भन्दै सभापति देउवाको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ।
PREVIOUS POST Previous post: आईपीएलः बैंगलोर ६ विकेटले विजयी, दिल्लीको चौथो हार
NEXT POST Next post: राणा शाशनमा ५ जनाले स्थापना गएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाइ दुई तिहाईको भारी
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, बैशाख ९, २०७५ ११:४७
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, बैशाख ९, २०७५ ११:४७
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, बैशाख ९, २०७५ ११:४७
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, बैशाख ९, २०७५ ११:४७
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, बैशाख ९, २०७५ ११:४७